Appzone mechiri $ 10 Mn Series A Ego
CardinalStone Isi Obodo Advisers na-eduga ego iji wuo "Operating System for Africa's financial services Industry"
Appzone, ndi Pan-African fintech software na-eweta ihe na - ewulite ihe ngwọta nke ụlọ akụ na ụlọ ọrụ na - akwụ ụgwọ maka kọntinent a, ekwuputala ngwụcha nke $ 10mn Series A gburugburu.
N'ịbụ onye CardinalStone Capital Advisers na-esonyere site na V8 Capital, Lateral Investment Partners, Constant Capital, na Itanna Capital Ventures, ọhụụ ọhụrụ ahụ ga-eme ka itinye ego na teknụzụ ndị Appzone dị elu ma gbasaa mmụba nke mba ọhụụ iji gbasaa ego. sistemụ arụmọrụ ezube iji digitize na machiini nnyefe nke ọrụ ego na kọntinent.
Amalitere na 2008, Appzone na-ewepụta ngwaahịa kacha mma maka klaasị dijitalụ dijitalụ na nhazi azụmahịa azụmahịa na ndị ahịa gafere mba asaa dị n'Africa gụnyere aha profaịlụ dị ka Access Bank, GT Bank na Zenith Bank.
Kemgbe ọ malitere, ụlọ ọrụ ahụ, bụkwa onye na-ede akwụkwọ nke ngwa ngwa Google, na-eduga na ngalaba fintech nke Africa site na mgbanwe ohuru nke rụpụtara ọtụtụ ọkwa ụwa niile site na kọntinent ahụ, gụnyere netwọkụ izizi ịkwụ ụgwọ izizi nke ụwa, nke mbụ isi ụlọ akụ na omni-channel software na igwe ojii na nke mbụ multi-bank direct debit ọrụ dabere na otu iwu ụwa.
Ruo ugbu a, nyiwe nke ụlọ ọrụ ahụ arụọla ụlọ akụ azụmaahịa 18 na akụ na ụba 450, na-enweta uru azụmahịa kwa afọ yana nbinye ego kwa afọ nke $ 2bn na $ 300mn n'otu n'otu.
Dika ulo akwukwo ndi ọdịnala nke Africa na fintech startups na-agbaso iyi egwu na-abawanye site na ụlọ ọrụ telco na ndị na-egwu egwuregwu teknụzụ, ngwa ngwa Appzone n'ụzọ zuru oke ma kwadebe ha iji merie nsogbu ndị kachasị njọ nke ngalaba ahụ gụnyere usoro ihe eji akwụ ụgwọ na nnukwu enweghị arụmọrụ arụmọrụ.
Ka ọ dị ugbu a, n'ihi oke ọnụọgụ dị iche iche dị elu nke na-edozi nsogbu ndị a, ụlọ akụ ọdịnala na ndị ịma aka n'Africa ejedebe na iji teknụzụ teknụzụ mba ọzọ ahaziri maka ahịa ndị ọdịda anyanwụ - ọtụtụ n'ime ha na-enwe nnukwu ngọngọ nke ọnụahịa anaghị akwụ ụgwọ, ezughi oke ime mgbanwe na enweghi nkwado teknụzụ mpaghara.
N’ikwu okwu banyere ego a, onye nchoputa na onye isi ulo oru Appzone Obi Emetarom kwuru: “Anyị nwere obi ụtọ ọ bụghị naanị na ị ga-echedo nnukwu ego ga - ebuli, kama anyị na - anabatakwa n'ụgbọ mmiri ụfọdụ ga - akwado ndị nkwado ga - abụ isi ihe maka njem anyị.
Ozi taa na-enye anyị ohere iwelie ngwa ahịa na ọrụ Appzone ngwa ngwa. N'ime afọ iri na abụọ gara aga, anyị arụla ọrụ na nzuzo, na-ewu ihe owuwu dị mgbagwoju anya iji mee ka ohere ịnweta ọrụ ego dijitalụ na-eto eto ma nwee mmekọrịta na nnukwu ụlọ ọrụ ego nke kọntinent.
N'ihe ndị ọzọ, anyị na-achọ ugbu a ịkwụ ụgwọ site na 1% kachasị elu n'Africa iji zụlite otu ndị ọkachamara ama ama gosipụtara onwe ha ịbụ ezigbo ndị na-ewu ụlọ n'Africa; ndị injinia sọftụwia kachasị dị elu na ndị ọkachamara na ngalaba, na-arụsi ọrụ ike siri ike nke iwuli ọkpụkpụ azụ na akụrụngwa ọgbọ ọzọ maka ọrụ ego dijitalụ n'ogo karịrị nke ụwa.
Anyị na-achọ onyinye na ịdị uchu injinia na entrepreneurial uche, agụụ na-agụ iji mee ngwangwa akụ na ụba ọganihu na mee ịma aka technology na anyị.
Anyi anaghi anwa iweta African fintech na uwa ndi ozo - anyi noo iji mee ka ngalaba ego anyi mara ihe ohuru na teknụzụ zuru ụwa ọnụ site na ihe ngwọta nke ndị Africa rụpụtara maka Africa. ”
Ka ọ dị ugbu a, ndị ahịa Appzone gbasaa n'ofe Nigeria, Ghana, Gambia, DRC (Democratic Republic of Congo), Tanzania, Senegal na Guinea wee ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ahụ ebulitela $ 15mn maka ego ha na ndị nwere ego gara aga gụnyere Lateral Capital, GreenHouse Capital, Timon Capital na Itanna.
Na 2018, ụlọ ọrụ ahụ nwetara nkwado site n'aka Central Bank of Nigeria iji rụọ ọrụ dị ka onye na-eweta ọrụ ịkwụ ụgwọ ịkwụ ụgwọ (PSSP) ma bụrụkwa onye natara ọtụtụ onyinye ụlọ ọrụ gụnyere onyinye Frost & Sullivan, NAMB (National Association of Microfinance) Banks) na CeBIH (Kọmitii nke eBusiness Industry Heads) onyinye.
Yomi Jemibewon, Co-guzobere na onye isi nchịkwa nke Cardinal Stone Capital Advisers kwuru:
“Ulo oru anyi na Appzone bu ihe akaebe ozo nke ikike Africa nwere dika ebe di n'ihu nke akuku uwa.
Appzone na-ewulite ihe okike FinTech na-emebi ihe nke ga-abụ azụ nke ụlọ ọrụ ego nke Africa yana ngwaahịa gafee ịkwụ ụgwọ, akụrụngwa na Software dị ka Ọrụ.
Mmetụta nke ọrụ Appzone dị ọtụtụ - ngwaahịa ụlọ ọrụ ahụ na-eme ka itinye ego na-abawanye ụba na kọntinent ahụ ebe ha na-enye azịza kachasị mma ma dị ọnụ ala na ụlọ ọrụ ego.
Nkọwa o mesiri ike na onyinye kachasị enye aka na-enye aka ịkwụsị ụbụrụ, na-akwụghachi ụgwọ ọrụ kacha mma nke Africa na nke kacha mma na ohere ọrụ klas. ”
N'agbanyeghị nsogbu ya, a na-eme atụmatụ na mpaghara ụlọ akụ nke Africa ga-enweta ọnụahịa ahịa zuru ezu nke $ 129bn site na 2022 dị ka McKinsey & Co.
Ka ụlọ ọrụ ahụ na-agba mbọ ijere ọnụ ọgụgụ buru ibu nke ndị Africa na-enweghị ego, enweela mmụba na-arịwanye elu nke usoro ntanetị na-ejupụta ọdịiche ahụ.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, mmalite ndị a dọtara mmasị dị ukwuu site n'aka ndị na-etinye ego na gburugburu ụwa na na 2020, ngalaba ahụ nwetara ihe karịrị otu ụzọ n'ụzọ atọ nke ngụkọta $ 1.3bn na ego ejiri n'aka ndị teknụzụ Afrika.
Ihe onyonyo a gosiputara: Ndi guzobere Appzone